Tsy hifandray amin'ny iTunes ny iPhone-ko. Ny tena fanamboarana ho an'ny PC & Mac! - Iphone
azonao atao ve ny manamboatra iphone aorian'ny fahasimban'ny rano
iphone mainty misy efijery fotsy
ny fomba hanampiana extension amin'ny iphone
mpandahateny tsy miasa amin'ny iphone
Tsy hifandray amin'ny iTunes ny iPhone-ko. Ny tena fanamboarana ho an'ny PC & Mac!
Ampidiro ao anaty solo-sainanao ny iPhone-nao ary sokafy ny iTunes fa tsy hiseho ny iPhone-nao. Niezaka nanala ny iPhone tamin'ny solo-sainanao ianao ary namerina azy io, nanidy ary nanokatra iTunes indray, ary azonao antoka fa mandeha ny tariby misy anao, fa mbola tsy hifandray izy io . Amin'ity lahatsoratra ity dia hanazava aho maninona ny iPhone-nao tsy hifandray amin'ny iTunes SY ny fomba fanamboarana ny olana amin'ny Mac sy PC.
Famahana ny olan'ny olana iPhone / iTunes: Aiza no hanombohana
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia ny hamarinina indroa fa mandeha tsara araka ny tokony ho izy ny tariby taratrao (tariby izay miampanga ny iPhone). Raha miasa amin'ny famandrihana ny iPhone ny tariby dia tsara angamba izany — fa tsy matetika. Ny tariby sasantsasany izay miasa amin'ny famandrihana dia tsy handeha hiasa data.
Hahita izany matetika ianao amin'ny tariby mora vidy hitanao amin'ny tobin-tsolika satria tsy dia avo lenta toy ny tariby vokarin'i Apple. Saingy tsy ny tariby tsy Apple rehetra no ambany kalitao - ity no mahasamihafa azy:
Mitadiava tariby voamarina amin'ny MFi
Ny tariby tselatra avo lenta dia MFi -voamarina . Rehefa mangataka mari-pahaizana MFi avy amin'ny Apple ny orinasa iray dia omena azy ireo ny mari-pahaizana avo lenta sy puce tokana tokana ho an'io tariby voafaritra io. Efa nahita ve ianao 'Ity tariby na kojakoja ity dia tsy voamarina ary mety tsy hiasa amin'ny fomba azo antoka miaraka amin'ity iPhone ity.' mipoitra amin'ny iPhone-nao? Midika izany fa ny tariby dia tsy voamarina MFi ary mety tsy avo lenta.
Amazon dia mivarotra be Tariby iPhone voamarina amin'ny MFi sahabo ho antsasaky ny vidiny toa an'i Apple. Raha miantsena amin'ny magazay ianao dia tadiavo ny logo 'Made for iPhone' eo amin'ilay boaty - midika izany fa voamarina amin'ny MFi ilay tariby.
Rehefa avy nanamarina ianao fa mandeha ny tariby taratrao dia andramo ny fametrahana ny iPhone amin'ny seranana USB hafa amin'ny solosainao . Mety lany ihany koa ny seranan-tsambo USB, ary indraindray mampiasa seranana hafa dia ampy hamahana an'io olana io.
Hatramin'io fotoana io dia tsy mitovy amin'ny Mac sy PC ny fanamboarana. Hanomboka amin'ny fampisehoana aminao ny fomba fanamboarana an'ity olana ity amin'ny PC misy Windows. Raha manana Mac ianao dia azonao atao ny mitsambikina mankamin'ny faritra momba izany inona no hatao rehefa tsy hifandray amin'ny iTunes amin'ny Mac anao ny iPhone-nao .
Ny antony mahazatra indrindra mahatonga ny iPhone tsy hifandray amin'ny iTunes amin'ny PC
Ny antony mahazatra indrindra mahatonga ny iPhone tsy hifandray amin'ny iTunes dia izany ny mpamily fitaovana tsy mandeha tsara.
Inona no atao hoe mpamily fitaovana?
ny mpamily fitaovana (na ara-drariny Driver ) dia ny programa milaza amin'ny Windows ny fomba fifanakalozana, na ny fomba 'firesahana' amin'ireo fitaovana mifandraika amin'ny solosainao. Raha tsy mandeha tsara ny mpamily iPhone anao dia tsy ho hain'ny solosainao ny fomba ifandraisana amin'ny iPhone-nao, ary tsy hiseho amin'ny iTunes izany.
Tsy miasa intsony ny mpamily noho ny antony maro samihafa, ary olana mahazatra amin'ny PC ho an'ny iPhone sy fitaovana hafa izany.
mailaka tsy mandeha amin'ny iPhone
Famahana olana ny mpamily fitaovana iPhone anao
Amin'ny solosaina PC, ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ny manokatra Mpitantana Fitaovana . Hahita Device Manager ao amin'ny Control Panel ianao, fa ny fomba tsotra indrindra hanatanterahana izany dia ny tsindrio eo amin'ny bara fikarohana ao amin'ny solosainao ary soraty ny 'Device Manager'.
Rehefa avy manokatra Device Manager ianao dia tadiavo Universal Controllers Serial Bus ary tsindrio ny kisary kely telozoro miankavanana fotsiny. Hisokatra ny menio dropdown ary tokony ho hitanao Apple Mobile Device USB Driver voatanisa eto.
Fanamarihana: Raha tafiditra ao anaty ny fitaovana ampiasainao ary miseho ao amin'ny Ny PC-ko na Ny solosainako fa tsy hitanao ny mpamily eto, aza manahy-ho tonga any aho avy eo.
Ahoana ny fomba hametahana ny mpamily USB Apple Device amin'ny PC
Raha hitanao Apple Mobile Device USB Driver fa ny iPhone-nao tsy hifandray amin'ny iTunes, ny mpamily angamba mila havaozina na amboarina. Tsindrio havanana Apple Mobile Device USB Driver ary safidy telo no tokony hiseho: Fanavaozana ny lozisialy mpamily…, Atsaharo , ary esory .
isa 6 ao amin'ny Baiboly
Alefaso ny mpamily raha azonao atao
Raha mahita safidy ianao Tadiavo , kitiho izany ary tokony ho voavaha ny olanao. Nisy fotoana, kilemaina ny mpamily, noho izany ny famelana azy dia hamaha ny olana. Raha tsy hitanao Tadiavo , mamakia hatrany.
Esory ary avereno ny mpamily
Hitako fa ny fanesorana sy ny fametrahana ny mpamily no fomba mora indrindra hamahana ny olan'ny mpamily. Hiseho fotsiny ny mpamily raha ampidirina ao anaty solosainao ny iPhone , ka alao antoka fa tafiditra ao ny iPhone alohan'ny hitadiavanao ity mpamily ity.
tsindrio esory ary Windows dia hanaisotra ny mpamily amin'ny lisitry ny Universal Serial Bus Controller. Avy eo, esory ny iPhone-nao ary ampidiro ao. Rehefa manao izany ianao, hahafantatra ny iPhoneo ho azy ny solosainao ary avereno apetraka amin'ny endriny vaovao ny mpamily.
Ny mpamily efa lany daty dia antony iray mahazatra mahatonga ny iPhone tsy hifandray amin'ny iTunes, noho izany tokony hamaha ny olana izany. Misokatra iTunes ary tadiavo ny kisary iPhone hahitana raha mifandray ny iPhone. Hamarino tsara fa mijery ny iPhone-nao ianao ary tsindrio 'Matokia' sao azo antoka fa hiseho izy io.
Maninona ianao no mila misafidy 'Matoky' amin'ny iPhone-nao
Tena zava-dehibe ny fitendrenao fahatokiana amin'ny iPhone-nao, na tsy hifandray amin'ny solosainao mihitsy izany. Amin'izao fotoana izao, raha miseho amin'ny iTunes ny iPhone-nao, dia efa vonona daholo ianao! Raha mbola tsy miseho ny iPhone-nao dia tohizo ny famakiana.
Safidio ny Safidy 'Fanavaozana ny lozisialy mpamily…' raha azonao atao
Raha misafidy ianao Fanavaozana ny lozisialy mpamily… aorian'ny tsindrio havanana eo Apple Mobile Device USB Driver, hahita safidy roa ianao: Mitadiava rindrambaiko mpamily nohavaozina ho azy SY Mikaroha rindrambaiko momba ny rindrambaiko mpamily .
Tsindrio eo Mitadiava rindrambaiko mpamily nohavaozina ho azy ary hikaroka amin'ny Internet i Windows mba hahitana kinova farany an'ny mpamily. Raha tsy mifandray amin'ny Internet ny solosainao dia mila tsindrio ianao Mikaroha rindrambaiko momba ny rindrambaiko mpamily —Hatoroko anao ny fomba hanaovana izany eo ambanin'ilay fizarana etsy ambany nantsoina Ahoana ny fomba hamahana ireo olana manavao ny mpamily sy ny zavatra tokony hatao raha tsy eo ny mpamily .
Raha tsy hitanao mihitsy ny mpamily (Tsy hita ao amin'ny Device Manager io)
Misy antony roa ny antony Apple Mobile Device USB Driver tsy hiseho amin'ny Device Manager:
Tsy mifandray amin'ny solosainao ny iPhone-nao. Sokafy ny Ny PC-ko na Ny solosainako fampirimana amin'ny solo-sainanao, ary raha mahita ny iPhone-nao ianao dia mandrosoa amin'ny safidy manaraka.
Tsy tonga tampoka na mametaka amin'ny solosainao ny mpamily. Raha nofafanao tamin'ny solosainao ny mpamily ary tsy ho hita izany rehefa ampidiroo indray ny iPhone dia izao no fanamboarana azy:
Rehefa tsy tonga mihitsy ny mpamily dia mitadiava safidy antsoina Fitaovana azo entina amin'ny Device Manager. Tsindrio ny kisary kely telozoro kely eo ankavanan'ny Fitaovana azo entina ary tokony hahita ianao Apple iPhone voatanisa. Ity dia fomba iray hafa hanamarinana fa mifandray amin'ny solo-sainanao ny iPhone-nao.
Ahoana ny fomba hamahana ireo olana manavao ny mpamily sy ny zavatra tokony hatao raha tsy eo ny mpamily
Manomboka amin'ity, ny fanitsiana dia nitovy tanteraka tamin'ny olana manavao ny mpamily sy ny mpamily izay tsy eo amin'ny Device Manager mihitsy.
Raha tsy eo intsony ny mpamily, tsindrio ny bokotra havanana Apple iPhone ambanin'ny Portable Devices. Safidio Mikaroha rindrambaiko momba ny rindrambaiko mpamily ary hisy varavarankely hiseho eo amin'ny efijery.
Raha manavao ny mpamilinao ianao, kitiho ny kisary kely telozoro kely eo ankavanan'ny Fanaraha-maso Universal Serial Bus, tsindrio Fanavaozana ny lozisialy mpamily… , ary avy eo tsindrio Mikaroha rindrambaiko momba ny rindrambaiko mpamily .
iphone 5s dia maty foana
Ahoana ny fomba hijerena ny mpamily USB Apple Device
Voalohany, mila mitady ny fampirimana izay itehirizan'ny mpamily ao amin'ny solosainao ianao. Midika izany fa hitety ny lahatahiry manaraka (na fampirimana) ao am-baravarankely:
Aza manahy - eto aho hanampy amin'ny fizotr'ity.
Mahita ny mpamily mahitsy amin'ny solosainao
Rehefa avy misafidy mijery ianao dia jereo ny lisitra mandra-pahitanao ny C Drive. Ity no mety ho safidy voalohany eto amin'ity PC ity na Ity Solosaina Ity.
Raha tsy misokatra ny folder This PC or This Computer, kitiho ny zana-tsipìka kely eo ankavanana hanokatra ny fampirimana ary hikaroka ny C Drive. Hahita zavatra toa ny OS (C :) na C fotsiny ianao:. Na izany na tsia, tsindrio ny zana-tsipìka eo akaikin'ny kapila C hanokatra ny menio dropdown.
Mikorisa ambany mandra-pahitanao Program Files SY tsindrio ny zana-tsipìka sokafy ny menio dropdown. Manaraka, mikorisa mankany Common Files ary sokafy indray ny menio dropdown-mahazo anao ianao, sa tsy izany?
Amin'ity indray mitoraka ity, tadiavo ny paoma fampirimana ary sokafy fa menio dropdown. Mikorisa indray ary tadiavo Fanohanana ny fitaovana finday ary fantatrao fa — sokafy ny menio dropdown. Dingana farany: tsindrio amin'ny fampirimana antsoina hoe Mpamily mifidy azy. Ity fampirimana ity dia tsy tokony hanana zana-tsipìka kely eo akaikiny — tsindrio fotsiny ilay fampirimana mba hisafidianana azy ary kitiho ok .
Nisafidy ny fampirimana marina ianao amin'ny fanavaozana ny Apple Mobile Device USB Driver na mahita mpamily tsy hita. Tsindrio izao Manaraka eo am-baravarankely, dia hahita hafatra izay manondro ny mpamily ianao fa tafapetraka tamim-pahombiazana na ny mpamily ankehitriny.
ny iPhone vaovao dia tsy hifandray amin'i iTunes
Raha mbola tsy miseho ny iPhone dia avereno indray
Amin'izay fotoana izay dia apetraka tsara ao anaty solo-sainao ny mpamily. Raha ny iPhone-nao Na izany aza tsy hiseho amin'ny iTunes, avy eo aho dia mamporisika ny hamerina amin'ny laoniny ny solo-sainao sy ny iPhone-nao. Esory ny iPhone amin'ny solo-sainanao ary vonoy ary avereno, ary avereno ny solosainao. Rehefa miverina miverina ny solosainao dia ampidiro ao anaty solo-sainao ny iPhone-nao ary sokafy ny iTunes hahitanao raha efa voavaha ilay olana.
Ezaka farany fanaovana ditch: esory sy avereno iTunes
Raha ianao Na izany aza tsy afaka mampifandray ny iPhone amin'ny iTunes amin'ny PC-nao, mila izany izahay esory tanteraka ny iTunes ary avereno apetraka ao amin'ny solosainao ny kinova farany an'ny iTunes . Ianao dia afaka misintona ny kinova farany an'ny iTunes avy amin'ny tranokalan'i Apple. Rehefa tapitra apetraka amin'ny solosainao ny iTunes dia tsara ny hevitrao restart ny PC alohan'ny hanohizanao ny fizotrany .
Ahoana no hamerenan'ny fametrahana indray ny iTunes ny olana?
Rehefa mamerina mametraka ny iTunes ianao dia hametraka programa madinidinika izay mandeha ao ambadiky ny solo-sainanao antsoina hoe Apple Mobile Device Support. Ity programa ity dia tena zava-dehibe SATRIA mihazakazaka ny mpamily sy ny interface izay mamela ny iPhone hifandray amin'ny iTunes . Ny fanesorana sy ny famerenana ny iTunes no fomba tsara indrindra hamahana olana amin'ny Apple Mobile Device Support.
Ny fanamboarana ny iTunes Library aorian'ny famerenanao ny iTunes
Raha esorinao ny iTunes dia tsy ho very ny mozika na ny sarimihetsikao fa mety mila manangana ny tranombokinao iTunes ianao. Aza matahotra - Apple dia manana lahatsoratra fanohanana lehibe antsoina Raha tsy mahita ny tranombokinao iray manontolo ianao rehefa manavao ny iTunes amin'ny Mac na PC-nao izany no hitarika anao mandritra ny fizotrany. .
Amin'izay fotoana izay dia ho voavaha ny olana— mandingana any ambanin'ny lahatsoratra hamonosana ny zavatra ary hamela fanehoan-kevitra momba ny dingana mety aminao.
Ho an'ireo mpankafy an'i Apple dia tsy hahagaga raha mazàna ny famahana olana momba ny antony tsy hifandraisan'ny iPhone amin'ny iTunes amin'ny Mac be tsotra kokoa noho ny famahana ny olana amin'ny PC. Alohan'ny hanaovantsika zavatra hafa dia mila mahazo antoka isika fa mahatsapa ny Mac anao fa tafiditra ao anaty solo-sainao ny iPhone-nao.
Ahoana ny fomba hijerena raha mahafantatra ny iPhone ny Mac anao
Voalohany, tsindrio ny Apple eo amin'ny zoro havia ambony amin'ny efijery hanokafana ny Apple Menu, ary safidio Momba an'ity Mac ity .
Manaraka, tsindrio Tatitra momba ny rafitra… hanokatra ny rindranasa System Information.
tsindrio USB amin'ny ankavia ary mitady iPhone .
iphone x sofina tsy mandeha
Famahana olana iTunes / iPhone amin'ny Mac
Raha miseho amin'ny System Information ny iPhone-nao fa tsy miseho amin'ny iTunes dia tsindrio ilay dingana 3 etsy ambany. Raha ny iPhone-nao tsy izany ao amin'ny lisitra, atombohy amin'ny dingana 1.
Manandrama seranana USB hafa amin'ny Mac.
Manandrama tariby mandeha amin'ny Jiro hafa.
Esory ny rindrambaiko fiarovana ny antoko fahatelo. (Mety ho rindrambaiko fiarovana indraindray KOA mahery setra ary manakana ny fitaovanao USB tsy hifandray amin'ny Mac.)
Avereno ao anaty iTunes ny fampirimana fanidiana. Zahao ity lahatsoratra momba ny fanohanana ity ny fomba hamerenanao ny folder Lockdown amin'ny Mac anao hianatra tsara ny fomba hanaovana azy.
Miseho indray ao amin'ny iTunes ny iPhone-nao!
Asa tsara! Amin'izao fotoana izao dia miseho amin'ny iTunes indray ny iPhone-nao. Matoky aho fa tsy nieritreritra mihitsy ianao hoe ho faly be mahita ilay sary kely iPhone ao amin'ny iTunes indray! Ny fanitsiana ny antony tsy hifandraisan'ny iPhone amin'ny iTunes dia tsy mora foana, ary mendrika tampoka eo an-damosinao ianao. Ankehitriny ianao dia afaka miverina amin'ny syncing sy manohana ny iPhone, sao dia mila mamerina azy amin'ny ho avy ianao. Ampahafantaro ahy ny fanamboarana mety aminao ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany.